Kitra – Fifanintsanana “Can 2021”: «Any Toamasina no tiako hilalaovan’ny Barea”, hoy i Dupuis | NewsMada
Kitra – Fifanintsanana “Can 2021”: «Any Toamasina no tiako hilalaovan’ny Barea”, hoy i Dupuis
Nafana ny adihevitra nifanaovan’ny mpanao gazety tamin’i Nicolas Dupuis, tao amin’ny fandaharana manokan’ny onjampeo Alliance 92 FM. Betsaka ny zavatra voalazany tao, manodidina ny Barea sy ny tontolon’ny baolina kitra.
Tsy nanafina ny zava-misy amin’ny Barea de Madagascar sy ny tontolon’ny baolina kitra eto Madagasikara i Nicolas Dupuis, nandritra ny fandalovany tao amin’ny onjampeo Alliance 92 FM, ny alarobia lasa teo, tao anatin’ny fandaharana manokana. Nolazainy tamin’izany fa any Toamasina ao amin’ny kianja Barikadimy no tiany hilalaovan’ny Barea de Madagascar, amin’ireo fihaonana hataon’ny Barea, eto an-toerana, saingy notsipihiny mazava tsara fa miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny filohan’ny federasiona malagasy (FMF) ny hahazoana manatanteraka izany.
Ankoatra izay, mila maka isa 10 ny Barea hahazoana maka ny tapakila hiatrehana ny “Can 2021”. Noresahiny avy eo ny fahavitan’ny pasipaoron’ireo mpilalao telo mirahalahy nantsoina, nisaorany ny filoham-pirenena, tamin’ny fanamorana izany: ny an’i Hery Bastien sy i Hakim Abdallah ary i Alexandre. Ny amin’i Ludovic Ajorque indray, efa nifampiresaka taminy io mpilalao io, saingy tsy namaly na eny na tsia. Izy rahateo, milalao ao amin’ny D1 any Frantsa ankehitriny ka tsy te hanelingelina azy ity mpanazatra ity fa maniry ny mba hampisongadina azy amin’izany. Nilaza ny faharatran’i Morel, amin’izao fotoana izao, koa izy.
Baolina kitra tsy matihanina
Ny amin’ireo mpilalao avy eto an-toerana kosa, mila maneho ny fahaiza-manaony izy ireo hahafahany miditra ao amin’ny Barea de Madagascar, araka ny heviny.
Nahitsy kosa ny tenin’i Nicolas Dupuis, amin’ny fahitany ny tontolon’ny baolina kitra eto Madagasikara. “Tsy mbola misy matihanina amin’ny baolina kitra eto fa mpilalao tsy mivelona amin’ity taranja ity no betsaka”, hoy izy.
Voaresaka tao anaty adihevitra ihany koa ny amin’ny fifindran-toeran’ireo mpilalao malagasy izay tokony hakan’ny rehetra lesona, manomboka izao. Eo koa ny fananganana ilay académie élite, hanofanana ireo taninketsa na ny “relèves”.
Harahinao manontolo ao amin’ny Alliance 92 FM ny adihevitra, anio alakamisy manomboka amin’ny 1 ora tolakandro, ary ny famerenana ny asabotsy ho avy izao, amin’io ora io ihany.